उपत्यकामा १० हजार संक्रमित रहेको आशंका, ‘चेन ब्रे`क’को प्रयास जारी ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/उपत्यकामा १० हजार संक्रमित रहेको आशंका, ‘चेन ब्रे`क’को प्रयास जारी !
काठमाडौँ – कोभिड–१९ को संक्र`मणले मुलुकका विभिन्न जिल्लासँगै संघीय राजधानीसमेत प्रभावित बनाएपछि त्यसको ‘चेन ब्रेक’ गर्न विभिन्न निका`यसँगको समन्वयमा उपत्यकाका पालिकाहरुले विशेष अभियान थालेका छन्। राजधानीमा संक्रम णको गति तिब्र भएपछि त्यसको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउँदै अन्यत्र फैलिन नदिन ‘कन्ट्या`क ट्रेसिङ् र शं`कास्पद क्षेत्र’का व्यक्तिको स्वाब परीक्षण तिब्र पारिएको छ।
मुख्य गरी उपत्यका नगरपालिका फोरमले त्यसको अगुवाइ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका १६ नगरपालिका र दुई महानगर फोरममा आवद्ध छन्। फोरमको बैठकले संक्रमण फैलिन नदिन वडातहमै पुगेर पहिचान र उपचारलाई तिब्रता दिने निर्णयमु ताविक काम थालेको हो। समु`दायमा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन एकीकृत रुपमा कार्यक्रम थालेको फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए। हाल उपत्यकामा १० हजार संक्र`मित रहेको आशं`काका साथ नियन्त्रणको काम अघि बढाइएको छ।
उक्त अभियानमार्फत समुदाय स्तरमा सं`क्रमण फैलिएको छ या छैन भन्ने कुरास मेत पत्ता लगाउने र समु`दायमा फैलिएको अवस्था भेटिए नयाँ रण`नीतिका साथ अघि बढ्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राप्त विवरणमा आजसम्म उपत्यकमा झण्डै तीन हजार व्यक्तिमा कोभिड–१९ देखिएको छ। झण्डै एक हजार २०० उपचार पछि निको भएर फर्किएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जन`संख्या मन्त्रा`यका प्रवक्ता डा जा`गेश्वर गौतमले उपत्यका लगायत केही जिल्लामा महामारीकै रुपमा संक्रमण फैलिएको जानकारी दिए। आज मात्रै उपत्यकामा २३२ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लाका १९९ छन्।
उपत्यकामा विगतमा नगन्य संक्र`मण भएकोमा बन्दा बन्दीको अन्त्य भएपछि साउनमा अ`त्याधिक रुपमा संक्रमित भेटिएको छ। साउन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले बन्दाबन्दी अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि बाहिरी जिल्लाबाट मानिस उपत्यका प्रवेश गर्दा संक्र`मण फैलिन सहयोग गरेको थियो।
‘पछिल्लो समय उपत्यकामा तिब्र गतिमा संक्र`मण फैलियो, अब संक्र`मण रोक्न सकिएन भने स्थिति जटिल बन्न सक्छ’, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका फोरमका सचिव श्रेष्ठले भने, ‘फैलिँदै गरेको संक्र`मणको ‘चेन ब्रेक’ गरेरै छाड्ने योजनाका साथ हामी लागेका छौं।’फोरमको हालैको बैठकले संक्रमितसँगको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने, उनीहरुको परिवारका साथै शंकास्पद क्षेत्रका मानिसको समेत स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
अनुसन्धानमा उपत्यकामा मात्रै अहिले सम्म यसरी प`रीक्ष`ण गर्नुपर्ने झण्डै २८ हजार ५०० रहेका छन्। उनीहरुको परीक्षण गर्दा १० हजारमा संक्रमण देखियो भने समुदायमा गएको पुष्टि हुन्छ। नत्र भने समुदायमा नपुगेको निष्कर्षका साथ रोक्ने आ`गामी रणनी`ति तय हुन्छ। सोहीअनुसार तथ्यांक संकलन र विष्लेषणको आधारमा हरेक नगरपालिकाले अभियान थालेको उनले बताए। श्रेष्ठका अनुसार मध्यपुर थिमीले वुधबार बाट उक्त अभियान थाल्दै छ।
‘दुई ‘हट स्पट’ छानेका छौँ, त्यहाँको बुधबार मात्रै ५०० जनाको स्वा`ब सङ्क`लन हुँदैछ’, श्रेष्ठले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल महानगरको १५ वटा वडाबाट कन्ट्याक ट्रेसिङको काम थालि`सकेको बताए।‘सबैभन्दा पहिले शका`स्पद व्यक्तिका स्वाब संकलन गरी परीक्षण नै हो त्यसपछि उनीहरुलाई राख्ने स्थान (आइसोलेशन)को व्यवस्थापन हो, त्यसमा लागेका छौँ’, डंगोलले भने।
पुण्य गौतम खुला मञ्चमा पलेटी कसेर नि: शुल्क खाना खान बसेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)